Posted in Space dhammaadka lahayn . ilaah . caalamka . jeclahay
Cosmos The ma aha tamar. All of this kooban, gediyay, gediyay, hagaagtay. jooga Energy oo tayo kala duwan. Habka ugu fudud si ay ula wadaagaan tamarta inta jeer ee gariirka. gariirka kasta tamartaa inta jeer qaadan kartaa mid ka mid ah ama mid kale foomka. Tani waxay abuurtaa shay ka mid ah inta jeer a gariirka qaarkood. Waxyaabaha noqon kartaa badan. La macaamilka kasta oo kale, waxay kaa caawin karaan in la hagaajiyo inta jeer ee gariirka jira. Sayidka Energy laga yaabaa in ay naftooda waa mid ka mid ah noocyada badan ee Energy, iyaga oo dhan oo ay ku jiraan.
Energy iyo waxyaabaha uu noqon karaa mid aad u kala duwan. tusaale ahaan, Energy buluug ama orange, qaaradda Energy, tamarta Life, tamarta sii kordhaya, Xiddiga Energy ama meeraha iyo kale.
tusaale ahaan, Hawiyaha ee tamarta ee Love, waxaad weli u geli kari tamarta nolosha. Waxa ay u muuqataa sidii ay tahay muuqashada caalamka iyo dhalmada in mid ka mid ah Caalamka degaanka.
In the case of fiirsashada dabiiciga ah ee tamarta had iyo jeer waa dareen ah Joy. Taas oo ah nooca gaar ruuxiga ah. farxad – hagahan, ku xigeenka iyo Saaxiibkiis oo dhan, kuwaas oo u kori,.
In AYFAAR caalamka (our caalamka) mid ka mid ah gobolka ugu badan ee horumarinta waa – jeclahay. marka xayawaankii, guuxa, gaadho gobolada Love shuruud la'aan – waxaa kici karo kor caalamka oo ka guurto on. Xaaladdan oo kale, ma jirto baahi gaar ah si ay u helaan waayo-aragnimo ee caalamka kale.
Cosmos jiritaanka Its waa Jacayl dhexdiinna ah iyo farxad. Waxaa jira meel bannaan.
nooc kasta oo nolosha waxaa laba jeer ku dhashay:
1) markii ugu horeysay – si uu u jiro.
2) mar labaad – in ay ku noolaadaan.
Tani waxay sidoo kale khuseysaa ku ashkhaas nooca aadanaha.
Dhalashada ugu horeysay ka dhigan formation Maandooriyaha tamarta macluumaadka, ee caadiga ah loo yaqaan Naf ama miyir.
dhalashada labaad – in mid ka mid muuqashadii Caalamka, kaas oo isticmaala tamarta nolosha. Sida caadiga ah waxaa loo raacay by gelida iyo siin jirka oo hore u jiray in Enhancement jidhka. Ka dib markii in ay jirto raasamaal ah oo waayo aragnimo ah iyada oo la dhexgalo xaqiiqada dhabta ah ee ku hareeraysan by yahay ee jirka.
In dhamaadka, waxaa soo baxday: In markii ugu horeysay waa inay awoodaan inay Jirta; mar labaad – ku nool. Oo ay ka fiicnaan lahayd fariida.
Helitaanka fursad ay ku jiraan, Miyir waa shay macluumaad tamarta ah, birqaya at inta jeer gaar ah ama kala duwan oo soo noqnoqoshada qaar. Sidaasaa waxa uu leeyahay sifooyin gaar ah iyo awoodaha.
Energy sida caadiga ah waxay yeeshaan u gaar ah, kaamileen by inta jeer ee hoose si ay u soo noqnoqoshada sare. Tani waxa dheer iyo qof kasta oo aan awoodo si ay u horumariyaan oo ay miyir u gaar ah. Qaar badan oo ka mid ah, sababtoo ah qaladaad gaar ah oo nabaad-is-haligaadda. Sidaas darteed, in Caalamka waxaa jiray AYFAAR dhibaato.
Si bartey caawin xalinta dhibaatooyinka loo abuuray, sida ugu Energy of Life Energy. Taas oo loo ogol yahay in la abuuro Caalamka deggan ashkhaas, Miyir in gariira in noocyo kala duwan oo kala duwan mawjadaha. dhibic ka mid ah abuurista Caalamka waa awood u leh inay si fudud loogu talagalay miyir, in ay si madax banaan ma aan samayn karo. feature Sidaas waxa muujiyay kaliya by xaqiiqada ah, in, jooga ee Caalamka, kuwaas oo, ku filan in la raaco talada miyir sare iyo horumarinta hoos imaanaayo kormeerkooda. Oo weliba dadkii degganaa oo dhan, waxay leeyihiin jirka functional la mid ah, taas oo ka dhigaysa waxaa suurto gal ah in ay ku daydaan u xeel iyo sidaas si loo hagaajiyo iyo dhaqaaqo weeraryahanka hab la xaqiijiyey lagu kalsoon yahay.
Laakiin xayawaan aan weli qaan gaadhin iyo kuwa, kuwaas oo la diiday maanka, Waxaan daawaday goobta iyo gabagabeeyay, in khasab ma aha horumariyo qorshaha wax abuura ee, maxaa yeelay, si fudud waxaad isticmaali kartaa dadkuba sare ujeedooyin iyaga u gaar ah, si ay u xaliyaan dhibaatooyinka iyaga u gaar ah; gacanta fudud oo dhan on heerka jirka ah, oo wuxuu sameeyey dadaal wadajir ah (shaqsi ahaan) gaaro booka oo ay sii wadaan si ay u isticmaalaan ujeedooyin iyaga u gaar ah. Xaaladdan haddii dhamaadka uu tamarta naftiisa – kaliya ku filan si ay u xadaan ka, oo weli waxa uu leeyahay. In si kale loo dhigo, kuwa dhallinyarada ah, doqon, ma soo maray: kuwa dunidan u imid dhawaan. A, si aan qofna dareentay, waxa ugu muhiimsan ma aha in la siiyo waqti ay ku soo kabsadaan. Sidaas darteed tuugada xariif xayawaan waalan lumiyaan jidhka ugu khiyaano, oo ay weli jidh a, taas oo ku kooban, iyo dhammaan jidadka jiritaankooda. Tan iyo markii, by Samo falku inaad ah tayada nafta isaga u gaar ah ay si joogto ah dumin – sida kaliya ee iyaga u afgembi – cloning this. Like faa'iido ugu jira in ay qof kasta oo kale in uu ka dhaadhiciyo, in Ilaah aanu jirin oo loo xidho dhammaan foomamka nolosha nafleyda, maxaa yeelay, waa qaab kaliya jiritaanka. Oo sidaas dhibaatooyinka fadhiidka galay buro gelida jeestay. meelaha noocan oo kale ah waxaa sida caadiga ah loo yaqaan “meel burada”. Dhibaatada waxa ay tahay mid fudud: oo dhan-kaliya jebiyey Order hagto. Si aad u xalliyaan – ku filan si loo soo celiyo si dabiiciga ah.
Qaabka uu burada.
Xaaladdan oo kale, qaabka burada Waxay ka dhigan tahay qurmay “shirt” gudaha rabarka, oo cunto siiya waxyaabaha weli nool “nalalka”, ACH turjumi Korn. toosan Sayidka jeermiska “nalalka” Ma wanaagsana, maxaa yeelay, la waayey oo ay suuragal tahay weli Content nool “nalalka”, kaas oo cunaa aad u “burada”. Inkastoo “burada” Waxaa la og yahay, oo wuxuu u adeegsanayaa nolosha nuugo sida la haystayaasha, sida damaanad ah jiritaankeeda, taas oo ah meel aad u cakiran.
Haddii daaweynta waa Burooyinka suurto gal? in, waxa uu noqon lahaa ay suuragal tahay, haddii “burada” Waxa uu isku dhiibay gacmaha Dhakhaatiirta hagto galay. Laakiin waxa tan iyo markii si joogto ah qarinayaan iyaga iyo iska waddaa – malaha, Dhacdadani waxa ay aysan u muuqan suuragal.
burada ayaa sidoo kale waxaa lagu arki karo cheater a, oo ku taala labada dhinac:
1) “Waxa uu ka kooban nool” wuxuu ku been abuurtay Bal waa kee Ilaaha oo wuxuu ku yidhi, isaga uu.
2) Ilaah, moodaa ayuu leeyahay, in “xaq All! All rabaan in ay sameeyaan, waxa dhaca iyaga”.
khiyaamo A caadiga ah, ku dheehan yahay oo awood u jira caadiga xumo “burada”.
Nolosha Cosmos ee.
Nolosha Space, suurto gal, qof yeelan doonaan in ay lumiso jidhkiisii. alaabtii dhacaya. ha ka quusanina, haddii ay taasi dhacdo. ugu weyn wuxuu taageeraa wada noolaanshaha ka runtan iyo waxay ka caawisaa ka adkaan dhulal cusub oo Space. Laakiin waa in aynaan isu bandhigan thrusts geesinimada aan habboonayn, taasoo keentay in la joojiyo nolosha, ama lumin jirka ay sabab u tahay bikirka, ama rabitaan nacas ah si ay u caawiyaan qof, Rajeynaaya in ay noqdaan si loo baahdo xitaa qof, Yaa idin illoobi doona daqiiqad.
Waxaa laga yaabaa in aad noqon kartaa saynisyahan a – waxay noqon kartaa ma jirto. Waxaa laga yaabaa in aadan ugu horeysay ee – waxaa laga yaabaa in ay haa tahay. Waxaa laga yaabaa in aad leedahay doonaa carruurta – waxay noqon kartaa ma jirto. Waxaa laga yaabaa in aadan ku faraxsan – waxaa laga yaabaa in ay haa tahay.
Xusuusnow, in tamarta yar-noqnoqoshada – Ma aha xun. Wax badan ayaa muhiim u tahay awood, iyagu waa a. Waxay noqon kartaa mid baaba'aysa, iyo synthesize karaa ama wax kale. Si kastaba ha ahaatee, ma dhaawici our yar.
Sida caadiga ah deggan meeraha muhiimad nooc isku gariirka. Tani waxay awood dadka oo dhan si ay u saar shaqeeyaan horumarinta u gaar ah, isagoo, kaliya oo ku saabsan, at resonance, oon ku gaaro xawaaraha horumarka weyn.
Habka Tani waxay u ogolaaneysaa deegaanada qaar ka mid ah dad ku ashkhaas dambi Planet, baabi'inta baahida loo qabo in si ay u ilaaliyaan xabsiyada iyo waayo-aragnimo cuncun joogitaanka gariirka wadnay ka.
Earth ee caalamka oo sidoo kale loo yaqaano ah “dhimashada Planet”. waxaa On waxaa jira vibrations tayo kala duwan iyo xayawaan, oo u dhiganta gariirka, kuwaas oo. tijaabo noocan oo kale ah dhacaan qabsiyada.
Cosmos koobi karayn jira sharciyo hoose. Waxay khuseeyaan Cosmos oo dhan iyo dhan, in ay tahay (oo ay ku jiraan barta kasta) iyadoo aan loo eegin meesha uu, nooca inta jeer, qarannimada, sharciyada gobolka, diinta, dhig caalamka, ama tilmaamayaasha kale. Space meel kasta waa iyo meel kasta waa aasaasiga ah.
Space lahayn oo iska One Brahman ah, waxaa la abuuro. The Qurub soocay Kan Brahman ah – Atman, sidoo kale waxay ka mid yihiin Brahman, sababtoo ah jiritaankooda gaar ah kuma xad daacadnimada miyir ku waynyahay; Waxay ka dhigan tahay nooc ka mid ah oo kala duwan oo ay joogaan in meel bannaan oo. In bayaankan waa run, Is ah – waa mulkiilaha mid ah Cosmos sida Brahman. Brahman – meel artist. No mid ka mid kale oo aan ahayn qoraaga mid Khalqiga laga yaabaa in aan ogaado sida ugu wanaagsan si ay u horumariyaan. In Is this xaq u leeyahay inuu tilmaamaya in waxa fiican in aad loo eegin sameeyo tirada Choice, iyo sidoo kale sida badan iyo waxa iska leh kan. Iyadoo la tixraacayo sharciga ee fiirsashada tamarta in aysan ku xad-amarka sababtoo ah Self waa nooca buuxda.
bannaan – ma aha oo kaliya cajiib cajiib Rowan aan la koobi karayn laakiin wax kasta oo, maado, saxarka ee ciidda, dhibic. Haddii aad aragto shay – waxaad arki hantida gaarka loo leeyahay ee Cosmos waynyahay ah. Haddii aad dareento dabaysha – Waa hanti gaar ah Cosmos waynyahay ah. Haddii aadan arko ama la dareemo – sidoo kale waa hantida gaarka loo leeyahay ee Cosmos waynyahay ah, kaliya aad jeceshahay. Brahman – milkiilaha Cosmos. waxaan Atman – waa isku mid sida Brahman. Sida caadiga ah tani xusuusiyo, haddii aad ka Halmaamaan oo ku saabsan, ama iska yeel.
ilaah – Midnimada waa dhamaystiran.
Ka hor inta aad qeexidda ugu sax ah oo dhan, in xaqiiqda dhabta ah cufnaanta hoos u Tan iyo imminka.
isagoo, aan ka dhergiyey shuruudaha ay goobjoog ka ahaayeen Cosmos koobi karayn isla markiiba ka bixi kartaa. Dhaqanka noocan ah waxaa loo arkaa hadal ah oo u jecel yihiin inay noqon baxay Cosmos ee. Ka dib oo dhan,, Fikirka ah in ay jiritaanka gaar noocan oo kale ah, weheliyay doonayo ama rabitaan ah in ay diidaan oo dhan, taas oo u dhiganta codsiga si uu u joojiyo jiritaanka iyo baaba'aan ka Cosmos waynyahay ah. Si la dili oo markiiba waa la aqbalay.
Haddii aad doorato in la abuuro wax ama dhiso – waxaa tayo samayn, maalgashadaan curiyay iyaga u gaar ah Taan jeclahayay oo dhan ugu fiican in aad leedahay. Sababta oo ah waxa ugu horreeya oo dhan waa anigaa iska leh.
Space dhammaadka lahayn.
Waa waqti: keeni daldalaad oo xukun dil.
ツ ૐ 卍 Saytuun Shanti – Xaqiijinta ♡ ★ ☸
Caanno damayaa buundada… -
arrinta ku duugan:
Cabir mass ee megalithic –
Gurtida metronome Instant
The Master iyo Margarita.
( ( ( bannaan ★ qurxoon ) ) )